मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्दै हुनुहुन्छ ? टिभीएसले दिन्छ यति सस्तो मूल्यमा ! - बैदेशिक पोष्ट
माघ ४, २०७८ १९;२३ मध्यान्ह प्रकाशित
यति मात्र नभई ग्राहकहरुले शून्य प्रतिशत ब्याजदर तथा अन द स्पट एक्सचेन्जको सुविधा पनि पाउनेछन् । यो योजना मुलुकभरीका सम्पूर्ण टिभीएस सोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ। टिभीएसले ग्राहकलाई मध्यनजरमा राखेर समय समयमा नयाँ योजनाहरु निकालि रहेको हुन्छ ।